ခရစ္စမတ်အလှဆင်စိတ်ကူးများ: ထွန်းပြက္ခဒိန်များနှင့်စတော့ရှယ်ယာ - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
ပုံရိပ်တွေ: Fabrika ဗြိတိန်
တူသောလက်ဖြစ်ပစ္စည်းတစ်ခု Etsy ဆိုင် - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ Mag Fabrika ဗြိတိန်တင်ဆက် buntings, ခရစ္စမတ်အလှဆင် နှင့် ကလေးလက်ဆောင်များ.
မင်္ဂလာပါဂျူလီယာ! အဘယ်ကြောင့်များနှင့်သင်မည်သို့ Etsy ပေါ်တွင်သင်၏ဆိုင် start ခဲ့တာလဲ
ဂျူလီယာ Jarvis (FabrikaUK): ငါဇန်နဝါရီလ 2015 ၌ငါ့ဆိုင်ဖွင့်လှစ်။
အဲဒီအချိန်တုန်းကငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့တူပါလိမ့်မယ်အရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရုပ်ပုံရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ, ဒါပေမယ့်ယခုနီးပါးနှစ်နှစ်အကြာတွင်ရုပ်ပုံရှင်းလင်းသည်နှင့်အပ်ချုပ်အကြှနျုပျအဘို့ရုံဝါသနာမျှမက, ဒါကြောင့်လည်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအချိန်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါမီးဖိုချောင်ထဲမှာသူမ၏အပ်ချုပ်သေတ္တာ, သူမ၏အပ်ချုပ်စက်နှင့်သူမ၏ဘေးတွင်တစ်ဖလား၌ Just-ပြုတ်ကော်ဖီအနံ့၏ဆူညံသံနှင့်အတူကစားခြင်းသတိရပါ။
သငျသညျအကြှနျုပျ၏ Etsy ဆိုင်ပေါ်အခမဲ့ရေကြောင်းနှင့်အတူကမဝယ်နိုင်ပါ။ အားလုံးခရစ္စမတ် SOCKS နှင့်ထွန်းပြက္ခဒိန်များတင်ပို့ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
သင် ... နိုင်ပါသည် Facebook ပေါ်မှာငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ.
တစ်ခုချင်းစီကိုစတော့ရှယ်ယာတစ်ခုစီခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကျယ်ပြန့်ထိပ်မှာ 16 စင်တီမီတာကျယ်ပြန့်အောက်ခြေမှာ 6.5 စင်တီမီတာအရပ်ရှည်ရှည်, 10 စင်တီမီတာတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်မွှေးဒါမှမဟုတ်သေးငယ်တဲ့ပစ္စုပ္ပန်နှင့်ပြည့်စုံစေနိုင်သည်။
Etsy အပေါ် Buy
တစ်ခုချင်းစီကိုအိတ်ကပ်စက် 6,5 စင်တီမီတာရှည်လျားခြင်းဖြင့် 8 စင်တီမီတာကျယ်ပြန့်ချုပ်နှင့်တိုင်းတာသည်။ အဲဒီမှာပြက္ခဒိန်ထဲမှာပျော့ wadding နှင့်ကျောထောက်နောက်ခံတစ် 100% ချည်ထည်ဖြစ်ပါတယ်။
Mini ကို Stock ပြက္ခဒိန်
တစ်ဦးချင်းစီ Stock ၏အပေါ်ဆုံးထောင့်တစ်ဦးမှာဆွဲထားများအတွက်အနည်းငယ်သာလက်ချုပ်ကွင်းဆက်ရှိပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီ Stock ၏နောက်ကျောအနီရောင်ချည်ထည်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
လူ့လက် skandi- စတိုင်ထွန်းပြက္ခဒိန်။ အဆိုပါမီးဖိုအထက်တွင်သို့မဟုတ်မြို့ရိုးပေါ်မှာဆွဲထားခံရဖို့နဲ့လာရန်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးနိုငျစံပြ။ စုံလင်သောခရစ်စမတ်အလှဆင်။
လူ့လက်ထွန်းပြက္ခဒိန်။ တင်ပို့ဖို့အဆင်သင့်။ ဤသည်ထွန်းပြက္ခဒိန် Makower ထွန်း panel ကိုဖန်ဆင်းသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအိတ်ကပ်စက် 6,5 စင်တီမီတာရှည်လျားခြင်းဖြင့် 8 စင်တီမီတာကျယ်ပြန့်ချုပ်နှင့်တိုင်းတာသည်။
ခုနစျပါး Mini ကိုစတော့ရှယ်ယာ
လူ့လက် mini ကိုခြေအိတ်။7mini ကိုခြေအိတ်များသတ်မှတ်မည်။ ဒါဟာအစတစ်ဦးမှော်ပွဲလမ်းသဘင်စိတ်ဓါတ်များကိုဖန်တီးရန်လေးတွေအိပ်ခန်းသို့မဟုတ်ပျိုးခင်းအတွက်ထားနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကို FabrikaUK အကြောင်းပိုမိုပြောပြပါ။
ကျွန်မကစားမှတဆင့်ချုပ်ဖို့သင်ယူနှင့်ပဲနှုတ်ဆိတ်ဘေးတွင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်သူမ၏စောင့်ကြည့်။ ငါတစ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူခြင်းရဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါစို့; အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာထိတွေ့ခံရခြင်း, (ငါ့အမှု၌) ကစားမှတစ်ဆင့်နှင့်အပ်ချုပ်ပြီးနောက်သင်ယူခြင်းသဘာဝကဖြစ်လာသည်။
ယနေ့တွင်ငါ၏အ mum, ငါဥရောပနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင်နေထိုင်, ဒါပေမယ့် "အပ်ချုပ်နယ်နိမိတ်ကိုသိရပါဘူး" နှင့်တောင်းဆိုချက်များကိုမြင့်မားတဲ့အခါကျနော်တို့အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြသည်။
မကွာ, ငါ့ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်ငါသည်ငါ၏ကိုယ်ပိုင်မွေးနေ့၏သီတင်းပတ်အတွင်းမွေးဖွားသူတစ်ဦးကလေးမိန်းကလေးများအတွက်ကိုယ်ပိုင် bunting, အဘို့အကြှနျုပျ၏ပထမဦးဆုံးအမိန့်ရတယ်။
အကြှနျုပျ၏ဒုတိယအလို့ငှာအမွှာကလေး, Jaques နဲ့ Gabriella များအတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အမိန့်ပြီးပါကနှင့်ကချွတ်ပေးပို့ခြင်းပြီးနောက်ငါ bunting ဘုရင်နှင့်မိုနာကို၏ဘုရင်မကြီးရဲ့အမွှာကလေးများအတွက်ခဲ့ကြောင်းထွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ငါ၏ပထမဦးဆုံးတော်ဝင်အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်!
ငါသည်လည်းတစ်ရုံးပါတီများအတွက် Barclays Bank ၏ဗဟိုရုံးကနေအမိန့်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါ၏အ bunting အမိန့်၏နောက်ထပ်နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးက BBC အစီအစဉ်တွင်သည်ထင်ရှားသည့်လက်ဖက်ရည်ဧည့်ခန်းများအတွက်ခဲ့, ငါ့ bunting နောက်ခံတွင်ပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ငါစသည်တို့ကိုအသစ်သောကလေးငယ်, ကလေးတွေအိပ်ခန်း, နာမည်, မွေးနေ့ပါတီများ, မင်္ဂလာဆောင်, အဘို့များစွာသောအမိန့်ရှိခဲ့
အကြှနျုပျ၏အမိန့်အားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလာကြ၏။ ကြှနျတေျာ့ဖောက်သည်အများစုမှာဗြိတိန်, အိုင်ယာလန်နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့်သော်လည်း, ငါသည်လည်းနည်းတူဝေးနယူးဇီလန်အဖြစ်စပိန်, ဂျာမနီ, ဒိန်းမတ်, ဂရိ, ရိုမေးနီးယား, ဆွစ်ဇာလန်, သြစတြေးလျ, စင်ကာပူနှင့်ထံမှအမိန့်ရှိသည်။
Etsy client များသငျသညျကိုရှာဖွေဘို့ကြီးစွာသောလမ်းပါ! ငါသည်ငါ့ဒေသခံမြို့မှာအနည်းငယ်ဆိုင်ခဲ့လျှင်ဖောက်သည်ထိုကဲ့သို့သောကျယ်ပြန့်မျိုးစုံမရှိခဲ့ဘူးရှိလိမ့်မယ်။
အကြှနျုပျ၏ Etsy စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငါ၏အအလုပ်များမိသားစုဘဝန်းကျင်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကျွန်မအသက်6နှင့်3နှစ်ရှိပြီနှစ်ခုအသေးကလေးတွေရှိသည်။ ငါအချိန်ပြည့်မိခင်ဖြစ်၏။ ကျနော်တို့အတူတူအရာအားလုံးကိုလုပ်ပေး: ငါတို့သည်အထွက်ကိုဖတ်ကျနော်တို့ play, ချက်ပြုတ်, ငါတို့မိတ်ဆွေများကိုဖြည့်ဆည်းကျနော်တို့ငါ၏အမိခင်ဘာသာစကားနည်းလမ်းများအတွက်စက်ရုံ (Fabrika, ထိုအလုပ်များနေ့ကကျော်နှင့်ကလေးတွေအိပ်ရာ၌ရှိကြ၏အခါ, နှစ်ခုဘာသာစကားများပြောဆို စက်ရုံ) ဖွင့်လှစ်။
ငါ၏အဆိုင်၏အသစ်ထုတ်ဝေထည်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုပြည်၌သင်တို့သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်များအတွက်အသုံးပြုအချို့အထည်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်စီမံကိနျးအတှကျသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့ခြံ / မီတာအားဖြင့်သူတို့ကိုမဝယ်, ဒါမှမဟုတ်ငါကိုသုံးပါနှင့်ကနေသင်တစ်ဦးယာဉ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းစေနိုငျသောတိကျသောထည်ရှေးခယျြနိုငျဖြစ်စေ။
အသစ်ငှားရမ်း bunting ဝန်ဆောင်မှုတိုးတက်မှုအတွက်ဖြစ်ပြီး, ငါ့ဆိုင်မကြာမီရောက်ရှိလာတော့မည်ဖြစ်သည်။
စာဖတ်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်စျေးဝယ်လူတိုင်းအတွက် Thank you!
ယင်း - FabrikaUK အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ လက်ဖြစ် buntings ဆိုင်
ထွန်းပြက္ခဒိန်, ကလေးလက်ဆောင်များ, bunting, ခရစ္စမတ်စတော့ရှယ်ယာ, လက်ဖြစ်, တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးပုံပြင်များ, Julia jarvis, startup | 21-11-2016 | rating:5/ 30